QARXIS:Madaxweyne Deni oo xil culus u Magacaabay nin la dhashay Xaaskiisa – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeMaqal Iyo MuuqaalQARXIS:Madaxweyne Deni oo xil culus u Magacaabay nin la dhashay Xaaskiisa
July 15, 2019 marqaan Maqal Iyo Muuqaal, Puntland, Wararka maanta 5
Madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Saciid Cabdulaahi Deni ayaa xil culus u magacaabay nin seedigiis ah.
Max’ed Yuusuf Maxamuud oo la dhashay xaaska Madaxweyne Deni Marwo Ijaabo Yuusuf Maxamuud ayaa loo magacaabay Maareeyaha Guud ee furdada Magaalada Boosaaso ee gobolka Bari.
Masuulkan ayaa maanta xilka kala wareegay Cali Shirwac Ciise oo xilka laga qaaday ka dib markii uu muddo dheer soo hayey, iyadoo maantana munaasabad uu xilka kula wareegay masuulka cusub lagu qabtay dekeda, taasoo ay kasoo qeyb galeen masuuliyiin kala duwan.
Dekeda Boosaaso ayaa ah isha ugu weyn ee dhaqaale ahaan uu ku tiirsan yahay maamulka Puntland, waxaana dhaqanka madaxda Soomaalida ka mid ah iney dad eheladooda ah ku naas nuujiyaan meelaha leh ilaha dhaqaale.
DAAWO VIDEO:Garaad Jaamac Garaad Cali oo ka Hadlay Weerarkii Kismaayo
Madaxweynaha puntland Haduu nin Sedigis ah Xil umagacabay sharci Didaya majiro,sedigina wadanka Xaq ayuu ugu leyahay in uu shaqo ka Qabto,kuwa waxay fafinaya wa dad wax dondonaya,haday wax shegayan ninka mesha laga qaday 20 ayuu mesha ka shaqaynayey,hadi nin kale lakenay waxba kuma jabna,dadka waxas dacayada ka dhigaya wax yabo kaxun aya jira ee kuwas ha so gudbiyen intey wax basiid ah ku mashquli lahayen.
Dani.. waa fariiiid arinkaa waan ku raacsanahay.
War xishooda, Xaq ma u leeyahay ninkaasi in uu meesha hogaamiyo, aqoon ma u leeyahay, Somali reer Puntland ma yahay, waa qalad in loo arko in ay madaxweynaha xidid yihiin., wax kasta xaalad lagama abuuro.
Haddii Dani seedigiis jagadaas aqoonteed iyo kartideed leeyahay maxaa diidaya in loo dhiibo?Tan kale shaqooyinka dawladu waa wareegto oo xaq ma aha in uu nin meel iska haysto 10,15 ama 20 sano.Shaqada dawladu shacabkay u dhaxaysaa.waxaanan oran lahaa qofkii soo hayey afar ama shan sano ha baneeyo jagadaas si uu qofkale u qabto.Qofkii isagu gaba shaqadii loo xilsaaray waa CAYRIS oo taas isweydiin ma leh.